Man'eelee harkisaa-fi-kaayuun Deemsisuu
Maadheelee harkisaa-fi-kaayuun Deemsisuu
Yeroo furtuu DirqalaAlt gad qabdu hantuutee gad dhiisuudhaan, haalata saaguu galchita.
Haalata saaguu keessatti, man'eeleen jiran bakka itti buuftu gara mirgaatti ykn gadiitti dhiibamu, akkasumas man'eeleen buufaman qubannoo amma duwwaa keessatti osoo hin irrabin saagamu.
Sanduuqni naannoo man'eelee deemsifamanii haalata saaguu keessatti adda fakkaata.
Haalata irrabuu keessatti handaarota naannoo bal'ina filatamee afran mara argita. Haalata saaguu keessatti handaara bitaa qofa yeroo man'eeleen galtee gara mirgaatti dhiibaman argita. Yeroo man'eeleen galtee gad dhiibaman handaara gubbaa qofa argita.
Akka bal'inni galtee gara mirgaatti ykn gara jalaatti maqu fageenya maadheelee maddaa fi galtee jidduu jiru irratti hundaa'a, yoo wardii tokko keessa deemsifte. Lakkoofsa maadheelee dalgaa ykn olee bal'ina deemsaa keessaa irratti hundaa'a, yoo gara wardii biraatti deemsifte.
Yoo maadheelee haalata saaguu keessaa gara tarree tokko keessaatti deemsifte(dalga qofa), achiin saaga maadheelee booda, maadheeleen hundi bal'ina maddaa guutuuf gara bitaatti maqu.
Furtuuwwan yeroo qabduun hantuutee gad dhiisamu tuqaman
Maadheeleen deemaniitu maadheelee bal'ina galtee keessaa irrabu. Maadheeleen maddaa duwwaa ta'u.
Maadheeleen garagalchamaniitu maadheelee bal'ina galtee keessaa irrabu. Maadheeleen maddaa akkuma duraatti hafu.
Geessituuwwan gara maadheelee maddaa saagamaniitu maadheelee bal'ina galtee keessaa irrabu. Maadheeleen maddaa akkuma duraatti hafu.
Man'eeleen deemaniitu man'eelee bal'ina galtee keessaa gara mirgaatti ykn gadiitti dhiibu. Man'eeleen maddaa, yoo tarreewwan tokko keessa wardii tokko irratti deemsiste malee duwwaa ta'u.
Yoo tarree tokko keessatti wardii tokko irratti deemsisuu barbaadde, maadheeleen bal'ina galtee keessaa gara mirgaatti maqu, achiin tarreen guutuun bal'ina maddaa guutuuf maqu.
Man'eeleen garagalchamamaniitu man'eelee bal'ina galtee keessaa gara mirgaatti ykn gadiitti dhiibu.Man'eeleen maddaa akkuma duraatti hafu.
Geessituuwwan gara maadheelee maddaa saagamaniitu maadheelee bal'ina galtee keessaa gara mirgaatti ykn gadiitti dhiibu. Maadheeleen maddaa akkuma duraatti hafu.
Title is: Man'eelee harkisaa-fi-kaayuun Deemsisuu